စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး၏ အဓိကမောင်းနှင်အားများ
ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ဆန်စပါး ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့ ဆန်စက်လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချမှုကို အထောက်အကူပြုစေတဲ့ အစိုးရဌာန များမှ အသင်းအဖွဲ့များဆိုပြီး၊ အပိုင်း ၃ ပိုင်းအကြမ်းအားဖြင့် ခွဲခြား၍ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင် လယ်သမားများမှာ ခေတ် အဆက်ဆက်ရဲ့ စမ်းသပ်မှု၊ ဖိနှိပ်မှု၊ ပံ့ပိုးမှု၊ လစ်လှူရှုမှုအစရှိတဲ့ အကြောင်းခြင်းရာများစွာရဲ့အောက်မှာ မိမိလက်ဝယ်ရှိ လယ်ယာမြေအား ဖက်တွယ်ရုံးကန်နေရတဲ့သူများဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာလူမျိုးများဟာ လယ်ယာမြေကို ချစ်ပါတယ်။ မိမိလယ်ယာမြေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ အလွန်စိုးရိမ်ကြသူများ ဖြစ်ပြီး၊ ယခုအခါမှာ လယ်ယာမြေကို ကျောခိုင်းရမယ့် အခြေအနေရောက်ရှိနေပါတယ်။ လယ်ယာမြေရဲ့ စိုက်ပျိုး စရိတ်ကုန်ကျမှုများ၊ သွင်းအားစုဈေးကြီးမြှင့်မှုများ၊ ထွက်ကုန်သီးနှံဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုများကြောင့် လယ်ယာမြေကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ တောင်သူများပင် ကျောခိုင်းစွန့်ခွာဖို့ စဉ်းစားသူများရှိသလို လက်ဆင့်ကမ်းယူရမယ့် လူငယ်များမှာလည်း လယ်တောကို စွန့်ခွာပြီး၊ နိုင်ငံတကာကို သွားရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လယ်ယာဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များ၊ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းရှင်များမှ လည်း စပါးမရှိရင် ဆန်စက်မရှိနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးရဲ့ အဓိကကျတဲ့ မောင်းနှင်အားမှာ ဆန်စက် ပိုင်ရှင်များနဲ့ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းရှင်များသာဖြစ်ပါတော့တယ်။ ထိုကဲ့သို့ဆိုရခြင်းမှာ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စတင်စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သည်မှ ကြိတ်ခွဲတင်ပို့ရောင်းချသည်အထိ (Supply Chain Mechanism) လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို အလယ်မှ ဆက်စပ်ပေးသူများမှာ နိုင်ငံရဲ့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များဟာ ခေတ် အဆက်ဆက် မိမိဒေသရှိ တောင်သူလယ်သမားများနဲ့ အစဉ်အမြဲထိတွေ့ဆက်စပ်နေသူများဖြစ်ပါတယ်။ တောင်သူများရဲ့ ဒေသ၀မ်းစာ အတွက် ကြိတ်ခွဲပေးခြင်း၊ တောင်သူများရဲ့ ပိုလျှံစပါးများကို ၀ယ်ယူကြိတ်ခွဲတင်ပို့ ရောင်းချခြင်း၊ ဒါ့အပြင် တောင်သူများ အခက်အခဲရှိပါက စပါးကြိုတင်ဝယ်ယူတဲ့ စပါးပေး၊ အလှမ်းပေးများပါ ဆောင်ရွက်နေသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ဆန်စပါးအထူးပြုကုမ္ပဏီများ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာလည်း ဒေသခံဆန်စက်ပိုင်ရှင်များ ရဲ့ အားကိုရယူပြီး ဆောင်ရွက်သူ များဖြစ်ပါတယ် အထူးပြုကုမ္ပဏီများမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် ကြွေးကျန် ရင်တောင်မှ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် များမှတဆင့်ဆောင်ရွက်ရာ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆန်စပါးကဏ္ဍရဲ့ အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များမှ မိမိဒေသအလိုက် မိမိဆန်စက်ရဲ့ စက်စွမ်းအားအလိုက် ကံထရိုက် လယ်ယာစနစ် သို့မဟုတ် သမ၀ါယမလယ်ယာစနစ်ကိုသာ ဖော်ဆောင်ဆောင်ရွက်မှာဆိုရင် လယ်ယာကဏ္ဍမှာ မလွဲမသေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်မြို့နယ် လယ်တော်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုမှ ဆန်စက်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးရဲ့ ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေအား လေ့လာနိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်မှာ ပြည်မြို့မှ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်သို့အထွက် ကားလမ်းဘေးမှာ ဆန်စက် တည်ဆောက်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဆန်စက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ စက်လည်ပတ်နိုင်မှုစွမ်းအားမှာ ၂၄ နာရီကို စပါးတင်း ၅၀၀၀ ခန့် ကြိတ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ စက်ကြိတ်အဆင့်အတန်းမှာလဲ တန်းမြင့်ဆန် (Super Quality) ဒါကြောင့် ၎င်းဆန်စက်ပိုင်ရှင်မှ ကြိတ်ခွဲရေးဝန်ထမ်းအပါအ၀င် စပါးသယ်၊ ဆန်သယ်လုပ်သားများနဲ့ စုစုပေါင်းလုပ်သား ၃၀ ဦးကိုနေ့စဉ် အလုပ်အကိုင်ပေးနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံးတစ်လကို ၂၀ ရက်မှ ၂၅ ရက်လည်ပတ်နိုင်အောင် ကုန်ကြမ်းရရှိရေးကစပြီး၊ စဉ်းစားဆောင်ရွက်ထားမှုကို တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဒေသမှာ မိုးစပါးနဲ့ နွေစပါးဟူပြီး၊ ရာသီ ၂ မျိုးစိုက်ပျိုးပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်စပါးတင်း ငါးထောင်နဲ့ တစ်လကို အနည်းဆုံးစပါးတင်း ၁ သိန်းကြိတ်ခွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ မိုးစပါးကို ဇန်န၀ါရီလမှ ဇွန်လအထိလည်းကောင်း၊ ဇူလိုင်လစပြီး အောက်တိုဘာလအထိကို နွေစပါးဖြင့် လည်းကောင်း၊ လည်ပတ်နိုင်ဖို့ စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မိုးစပါးအတွက် ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း နွေစပါး အတွက် စပါးအခြောက်ခံစက် လိုအပ်သဖြင့် ၂၄ နာရီစပါး ၃၀၀၀ အခြောက်ခံနိုင်တဲ့ စပါးအခြောက်ခံစက် ၂ လုံးနဲ့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ စပါးကုန်ကြမ်း ရရှိရေးအတွက်လည်း ဒေသအတွင်း စားသုံးသူများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးလျက် ရှိပါပြီး၊ ၎င်းင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လယ်ဧက ၁၀၀ ကျော်မှာ ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားရှိတဲ့ ဆင်းသွယ်လတ် စပါးမျိုးများကို အနီးပတ်ဝန်းကျင် မျိုးစေ့ထုတ်ခြံများမှလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန အကူအညီနဲ့လည်းကောင်း၊ မျိုးသန့်များရယူပြီး၊ တောင်သူများကို မျိုးသန့်များဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိပါတယ်။ တောင်သူများအတွက် မျိုးစပါးကို ၀ယ်ဈေးအတိုင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဓါတ်မြေသြဇာများကို သတ်မှတ် ထုတ်ဈေးအတိုင်း ရောင်းချပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များမှ နည်းပညာများလည်း လယ်ကွင်းထဲ အရောက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ထွက်ရှိလာတဲ့ စပါးများကို ဈေးကောင်းပေးပြီး ၀ယ်ယူခဲ့သလို ယခုနှစ် နွေစပါးမှာ ပံ့ပိုးငွေများအားလုံး ပြန်လည်ရရှိပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ စိုက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ မျိုး၊ သွင်းအားစု တန်ဖိုးများအား အတိုးလုံးဝမယူဘဲ ထုတ်ပေးစဉ်က ဈေးနှုန်း အတိုင်းသာ ပြန်လည်ကောက်ခံကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တောင်သူများမှထွက်ရှိတဲ့ စပါးများကိုသာ ပြင်ပပေါက်ဈေးထက် စပါးအရည်အသွေးကောင်းရင် ကောင်းသလို ဈေးပိုပေးပြီး ၀ယ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။ ယခုနှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မိုးစပါးမှာ ဧက ၁၀၀၀ အတွက် မျိုးစပါးတင်း ၂၀၀၀ ကို တောင်သူများကို ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ် ပါတယ်။ တောင်သူများထံမှလည်း စပါးပေါ်ချိန်မှာ အခြေခံဈေးဖြစ်တဲ့ စပါးတင်း ၁၀၀ ကို သုံးသိန်းခွဲ ဈေးနဲ့ ၀ယ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်း၊ စပါးပေါ်ချိန်မှာ အခြေခံဈေးထက်ကျော်လွန်နေပါကလည်း ပေါက်ဈေးအတိုင်း ပေးချေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ စပါးအရည်အသွေးကောင်းရင် ကောင်းသလို ဈေးပိုမိုပေးပြီး ၀ယ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်း နားလည်မှုစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဆန်စက်တစ်နှစ်စာအတွက် စပါးတင်း ၁၀ သိန်းရရှိဖို့ ဧက ၅၀၀၀ စိုက်ပျိုးလျက်ရှိတဲ့ တောင်သူများနဲ့ မျိုးသန့် ထုတ်လုပ်ပေးပြီးမိုးစပါး၊ နွေစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့လည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အလားတူ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ချိန်မှာလည်း တောင်သူများ ရိတ်သိမ်းချွေလှေ့မှုကြောင့် လျော့နည်းဆုံးရှုံးမှုများ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ရိတ်သိမ်းချွေလှေ့စက်ဝယ်ယူပြီး၊ ရိတ်သိမ်းေ>ခလှေ့ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အလားတူ ဆင်းသွယ်လတ်စပါးကို ထိပ်စဆန် (စူပါဇီးရိုး) ကြိတ်ခွဲပြီး၊ မကွေးတိုင်းအတွင်းဖြစ်တဲ့ မင်းတုန်း၊ ကံမ္မ၊ အောင်လံ၊ မကွေးဒေသများကို ဒေသတွင်း စားသုံးဆန်အဖြစ် တင်ပို့ရောင်းချတဲ့အပြင် ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင် ဈေးကွက်ကိုလည်း ပုံမှန်တင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။ ပြည်ပတင်ပို့လိုတဲ့ ကုမ္ပဏီများ (Exporter) များမှလည်း ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းမှုများရှိလို့ ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကောင်းတဲ့ ဈေးကွက် အလားအလာကောင်းတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေသတွင်း ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးသူများမှ စပါးပေါ်ချိန်ဘယ်ဈေးနဲ့ ဘယ်လိုရောင်းရမှန်း မသိဖြစ်နေရာမှ ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးသူရှိလို့ တောင်သူများ မှလည်း အားကြိုးမာန်တက် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖော်ပြပါ ဆန်စက်ပိုင်ရှင်ကဲ့သို့ နိုင်ငံအတွင်း ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များမှ မိမိဆန်စက် ၀န်းကျင်ရှိ တောင်သူများအား မျိုး၊ သွင်းအားစု၊ စိုက်ပျိုးစရိတ်များ အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိဆန်စက်အတွက်လည်း ကုန်ကြမ်းရရှိပြီး မိမိလည်း အကျိုးရှိသဖြင့် အတ္တ၊ ပရမျှတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်သလို ဆန်စက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း တိုက်တွန်းရေးသား လိုက်ပါတယ်။ ခေတ္တရာဟင်္သာ - ပြည်
အခြားပြည်တွင်းသတင်းဟောင်းများ	MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 3774985 Since June 2008